Ireo endri-tsoratra 8 tsara indrindra amin'ny fanoratana | Famoronana an-tserasera
Na dia tsy nampiasaina aza izy ireo taona vitsivitsy lasa izay, mbola misy ny melankoly te hamerenana ny fanoratana amin'ny milina fanoratana, tsy ho toy ny haingon-trano singa, fa toy ny fialam-boly, izay hamerina ny milina sy hampiasa azy io.
Ny fanindriana ny fanalahidy tsirairay dia ezaka izay tsy hankafizan'ny mpamorona maro manomboka izao eo amin'ny tontolon'ny famolavolana. Ary izany no izy, ny typography ny milina fanoratana dia singa ilaina rehefa mamolavola, miankina amin'ny inona ny lahatsoratra.
Mpamorona maro, tsy manana fahafahana miditra amin'ny milina toy izany, dia mila mahita ny endri-tsoratra mety izay mitazona ny maha-zava-dehibe ny milina fanoratana, taloha, ka izany no antony hanangonantsika ny safidy tsara indrindra. litera milina fanoratana.
1 Inona no atao hoe litera milina fanoratana?
2 litera milina fanoratana
2.3 Lucida milina fanoratana
2.5 Office Sans
2.6 Manoratra tesis
2.8 milina fanoratana voafafa
Inona no atao hoe litera milina fanoratana?
Ny endri-tsoratra, na araka ny fantatra ihany koa, ny endri-tsoratra, dia iray amin'ireo ampiasaina indrindra rehefa miasa amin'ny famolavolana vintage. Na dia efa ela aza ny milina fanoratana dia tsy tao amin'ny studio design, dia maro ireo tia an'io endri-tsoratra io.
Misy endri-tsoratra maromaro amin'ny milina fanoratana, izany hoe ny tsirairay amin'izy ireo dia manana fiovaovana. Ny endri-tsoratra izay ampiasaina amin'ny fanahafana ny soratra tany am-boalohany dia a typography miaraka amin'ny endrika mahazatra, tonta, misy endrika kely.
Izy io dia karazana endri-tsoratra misy lafiny iray iraisan'izy ireo, na dia eo aza ny fiovaovany, dia manana a mitovy sy maharitra ny sakany eo anelanelan'ny tapa-kazo sy serif. Araka ny efa nambarantsika, ireo endri-tsoratra ireo dia avy amin'ny milina fanoratana tranainy.
Talohan'ny ordinatera dia efa mahazatra ny mitendry mba hifandraisana, na ho an'ny taratasy manokana na ho an'ny orinasa, fanasana, filazana, sns. Ankehitriny, ny fampiasana azy dia voafetra amin'ny fotoana fametrahana amin'ny boky ho an'ny lohateny, na rehefa te hanome endrika ara-dalàna na vintage ilay sombin-tsary.
litera milina fanoratana
Manaraka izany dia hasehontsika anao a fifantenana endri-tsoratra isan-karazany ka manana references samihafa ianao ao amin'ny catalogue typographic anao.
Izy io dia niseho tamin'ny 1974, teo am-pelatanan'i Joel Kanden sy Tony Stan, izay namorona an'io abidy io mba haka tahaka ny endri-tsoratra ampiasain'ny milina fanoratana. Manambatra ny hamafin'ny endri-tsoratra tranainy miaraka amin'ny fomba ankehitriny sy ankehitriny.
Noforonin'i Howard G. Kettler tamin'ny 1995 ho an'ny IBM, ny endri-tsoratra Courier Iray amin'ireo malaza indrindra eran-tany izy io. Karazana sora-baventy nokasaina ho an'ny milina fanoratana izy io, ka izany no mahatonga ny tarehin-tsoratra ao aminy mitovy sakany, ary noho izany antony izany dia tsy mitovy ny andalana amin'ny soratra amin'ity endritsoratra ity, izany hoe ny litera m. mitovy toerana amin'ny litera i ohatra. Ireo tsy fahalavorariana ireo no mahatonga ny endri-tsoratra Courier ho fanta-daza amin'ny tontolon'ny famolavolana ary mbola ampiasaina ankehitriny.
Adrian Frutiger dia nanamboatra azy io taty aoriana ho an'ny IBM Selectic Microsoft mba ho azo ampiasaina amin'ny tranonkala. Izy io dia endritsoratra efa napetraka amin'ny MacOs sy Windows.
Lucida milina fanoratana
Lucida Typewriter dia an'ny fianakaviana Lucida. Izy io dia noforonin'i Charles Bigelow sy Kris Holmes tamin'ny 1985. Io endri-tsoratra io dia iray amin'ireo karazana milina fanoratana nomerika voalohany.
Ity endri-tsoratra ity dia manana fiovana kely sy manjavozavo amin'ny hateviny eo amin'ny tandrony ary azo vakiana tsara. Karazan-tsoratra mavesatra nefa mazava izy io rehefa mamaky azy.
Iray amin'ireo asa soratr'i Nils Thomsen. Ny Comspot dia manandrana mamerina ireo endri-tsoratra mahazatra amin'ny milina amin'ny fanoratana ny taloha, fa ny fampifanarahana azy amin'ny fikasihan'olombelona.
Izy io dia noforonina tamin'ny taona 2015 ho endri-tsoratra orinasa ho an'ny Comspot, mpaninjara fitaovana sy rindrambaiko. Amin'ny ankapobeny, telo pesos ihany no nilaina, saingy nitarina ho sivy izy ireo, ho an'ny famoahan-dahatsoratra. IRETO ny lanjany dia aingam-panahy avy amin'ny tantaran'ny orinasa, tany am-boalohany, ny kaody fandaharana.
Noforonin'i Erik Spiekermann tamin'ny 1990. Officina Sans dia endri-tsoratra izay Ny tanjona dia ny hifampiresaka tsara amin'ny endrika orinasa sy birao. Miaraka amin'ny fomba mifototra amin'ny endri-tsoratry ny milina fanoratana tranainy fa miaraka amin'ny rivotra maoderina sy teknolojia kokoa.
Ny endritsoratra Officina dia manana zana-pianakaviana roa; ny Officina Sans, tsy misy finials ary ny Offica misy finials. Tamin'ny voalohany, ho an'ny fampiasana any amin'ny birao dia roa pesos ihany no nananany, saingy noho ny nivoahany tamin'ny fampiasana azy ho an'ny fanentanana dokam-barotra, dia nila nampiana ny lanjany. Izy io dia a typography tena mora vakina noho ny elanelany, ny haavon'ny X sy ny bikany.
Izy io dia endri-tsoratra karamaina, ary safidy tena tsara rehefa mitady endri-tsoratra milina fanoratana. Thesis typewriter manana lanja telo samy hafa, sahy, tsy tapaka ary ny fahatelo antsoina hoe reraka, no tena mahaliana indrindra amin'ireo telo satria manome ny endriky ny litera, manome azy ireo fomba tranainy.
Gareth Hague mpamorona endri-tsoratra, no mpamorona ny Aminta, endri-tsoratra izay mampiray amin'ny fomba tany am-boalohany, ny fomba mahazatra ny milina fanoratana tranainy, miaraka amin'ny rivotra maoderina Helvetica typeface.
Ny elanelana misy eo amin'ireo tarehin-tsoratra ao aminy dia mahatonga antsika ho teleport ary toa manindry ny fanalahidin'ny milina fanoratana tsirairay isika.
milina fanoratana voafafa
Noforonin'i Paulo W. Erased Typewriter 2 dia a litera milina fanoratana amin'ny fomba mampalahelo, izay miteraka fahatsapana ny karazana milina tany am-boalohany. Ity endri-tsoratra ity dia manana lanja efatra hanamboarana ny endrikay, ara-dalàna, sahy, sora-mandry ary tsipiho.
Ny milina fanoratana dia iray amin'ireo fitaovana famokarana typografika aloha. Iza no tsy mahatsiaro ny feo isaky ny nanendry fanalahidy iray, ary ny ezaka tafiditra amin'ny fanerena ny bokotra tsirairay mba hijanona ao amin'ny taratasy ny taratasy. Sarotra be ny mandre sy mahatsapa izany indray, fa noho ireo typographers izay namolavola endri-tsoratra aingam-panahy avy amin'ny milina fanoratana dia afaka mamerina io fomba tranainy io isika, afaka miverina amin'ireo fotoana ireo.
Ny fananana katalaogin'ny endri-tsoratra amin'ny milina fanoratana dia zavatra ilaina rehefa mamolavola, mba hihazonana io foto-kevitra tranainy io, fomba fijery mirindra sy tonta.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ireo endri-tsoratra 8 tsara indrindra amin'ny milina fanoratana